Maurice Tsihavonana Ramanandraibe : Nodimandry omaly atoandro -
AccueilSongandinaMaurice Tsihavonana Ramanandraibe : Nodimandry omaly atoandro
03/07/2018 admintriatra Songandina 0
Taorian’ ny tsy fahasalamana izay voatery nihidiran’ i Maurice Tsihavonana hopitaly , dia nidaosin’ ny fahafatesana omaly teo amin’ ny faha 58 taonany ity mpanao gazety sady talen’ ny famohan’ ny onjam-peo sy fahitalavitra ON AIR ity. Tena nahafantarana azy ny famakafaka mikasika ny toe-draram-pirenena nifandimby , indrindra rehefa mafampana ny toe-draharaha. Ny taona 1991 no nidirana voalohany teo amin’ ny asa fanaovan-gazety tao amin’ ny onjam-peo Tsioka Vao , izay niharahany tamin’ ireo mpanao gazety Johary Ravaojanahary izay talen ‘ny ORTM amin’ izao fotoana izao. Marihana fa teo alohan’ ny naha mpanao gazety azy dia efa namarana ary efa nikarakarana ny fivohana ho mpitsabo i Maurice tsihavonana, saingy tamin’ ny fotoana izay hanatanterahina izany hoy ny reniny no nodimandry ny vadiny ary nihovany sehatra hafa dia ny fanaovan-gazety izany. Tsy nijanona teo amin’ ny asa fanaovan-gazety anefa i Maurice Tsihavonana fa ny taona 1991-1992 dia lasa diplaomaty tany Maorisy ny tenany nandritra ny 20 volana ary mbola niampy 20 volana ihany koa tao Italy . Taorian ‘ireo namitan’i Maurice Tsihavonana iraka sy nisoloany tena an ‘i Madagasikara teny ivelany ireo dia ny taona roa arivo indray no niverina antanindrazana, ka tamin’ izany no nitazonany ny toerana amin’ny maha tompon’ adraikitry ny onjam-peon’ny Antsiva azy.
Ny taona 2003 kosa dia lasa tany Marseille indray i Maurice Tsihavonana ary tamin’ izany no nitazonany ny toeran’ ny lefitry ny kaonsily tany an-toerana nandritra ny taona maromaro, ka rehefa nampodiana ny kaonsilin’ i Madagasikara tany Marseille io dia izy no niakatra tamin’ ny toerana. Rehefa namaivahy indray moa ny krizy ny taona 2009 dia nody teto an-toerana i Maurice Tsihavonana nijanona volana vitsivitsy ary naverina nitazony ny toerany tany Marseille amin’ ny maha kaonsilin’ i Madagasikara azy. Rehefa nirehitra indray anefa ny adin-tserasera nisy teto amin’ ny firenena dia nantsoina niverina teto an-tanindrazana indray ny tenany ary tamin’ izany no niasany tao amin’ ny onjam-peo sy fahita lavitra Viva izay niandreketany ny fandaharana Aoka Hazava. Rehefa nandeha indray ny taona dia volana dia niandraikitra ny onjam-peo sy ny fahitalavitra On Air indray i Maurice Tsihavonana ary tamin’ izany dia nitazona ny toeran ‘ny talen’ ny famohana izy. Anisan ‘ny nahenohana azy farany izay hita tamin’ ireo fampahalalam-baovao maro isan-karazany ny fifandirana nisy tamin’ ny zanaky ny mpamily izay niasa tao aminy. Etoana ny vondrona RLM Comminication dia mitondra ny teny fampihononana ho an’ ny fianakaviana i Maurice Tsihavonana.